जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ) ! - Arghakhanchi Saptahik
जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ) ! जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ) ! Slider
तपाईं संक्रमित बन्न र केही आवश्यकता समय आफ्नो जीवन ruining सुरु गर्न र तिनीहरूले उत्पादन कि toxins कारण हो रूपमा ती परजीवी यस्तो तत्काल रोग धेरै समस्याहरूको हुन सक्छ - किन तिनीहरूलाई केही कारण समस्याहरूको सुरु गर्नु अघि एक समय आवश्यक छ। तिनीहरूलाई बारेमा सबैभन्दा भयानक कुरा उनि शरीर बस्ने र यो वास्तवमा खुवाउने छन् भन्ने छ। पिन्वोर्म्स , दिएन्तमोएब फ्रागीलिस , त्रिचिनेल्ला , एस टैपवार्म, हूक्वोर्म्स र लेबिया परजीवी को
प्रकार हो र तिनीहरूलाई केही पनि शरीर भित्र अन्डा र रातो रक्त र व्यक्ति खपत कि खाना खान्छन्।
ती परजीवी यहाँ आफ्नो शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छन् कसरी सोच भएकाहरूलाई लागि आफ्नो जवाफ छ - यो परजीवी infestations, पाल्तु जनावर र नजिक सम्पर्क, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली र गरिब स्वच्छता छ कि क्षेत्रमा यात्रा, मुख वा छाला मार्फत स्पष्ट छ।
यस लेखमा शायद यदि तपाईं चेतावनी संकेत परजीवी संकेत हुन सक्छ भनी देखाउने संग आफ्नो शरीर मा एक परजीवी छ तपाईं पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। र ती हुन्:
भोक र वजन को 1 परिवर्तन - एक पिन्वोर्म वा तपेवोर्म इन्फेस्तेशन संकेत गर्न सक्नुहुन्छ के वजन संग भोक वृद्धि को संयोजन छ। तपाईंले पहिले नै अंदाजा सक्छ किन छ भनेर - परजीवी तपाईं उपभोग नै खाना खाने र मामला मा तपाईं तुरुन्तै डाक्टर जान यो भइरहेको नोटिस त्यसैले, तपाईं सामान्य भन्दा भोक थप महसुस किन हो किनभने।
2 थकान र कमजोरी - भावशून्य एक भावना कमजोर शरीर र शरीर त्यहाँ आवश्यक खनिज, बोसो, भिटामिन र कार्बोहाइड्रेट को मलब्सोर्प्तिओ हुँदा कमजोर बन्न सक्छ के तपाईं निराश थकित छोड्न हुनेछ र। र तपाईं अत्यावश्यक पोषक को मलब्सोर्प्तिओन के कारण छ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? - द आंतों कीडे तपाईं उपभोग खाना मा खुवाउने। र हामी पहिले नै उनि शरीर भित्र तोक्षिन्स उत्पादन
गर्न सक्छन् भनेर उल्लेख र आफ्नो अङ्गहरू थकान, कम ऊर्जा र कमजोरी पैदा बर्बाद हटाउन क्रममा कठिन काम गर्न गर्नेछ के छ। तपाईं सुत्न भने र राम्ररी
खान तर तपाईं अझै पनि थकान महसुस गर्दै छन्, आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
3 पेट दुखाइ - के सुनिएको भावना र पीडा गर्न सक्छ किनभने यो सुनिंनु र जलन पैदा हुनेछ कि माथिल्लो सानो आंतों क्षेत्रमा बसोबास एक परजीवी छ। को पेट मा माथिल्लो भाग मा दुखाइ शरीर देखि बाहिर निस्कन कारण फोहोर उत्पादन को अवरुद्ध खण्डमा कारण छ र परजीवी गरिरहेको सक्षम छन्। तुक्के ~ से, hookworms, tapeworm र roundworm पीडा यस प्रकारको संग सम्बन्धित छन्।
4 दीर्घकालीन पाचन समस्या - त्यहाँ आंतों परजीवी इन्फेस्तेशन कारण सुनिंनु
छ जब पेट गर्न आंतों अस्तर नाश, र त्यो पुरानो पखाला गर्न अग्रणी छ। तपाईं
फाइबर मा उच्च खाद्य पदार्थ उपभोग र भने कि हरेक दिन अत्यधिक alkaline छन्
र तपाईं अझै पनि, पखाला छ प्राप्त एक डाक्टर जानुहोस्।
5 गुदा खुजली - महिला कीडे राति अन्डा जब यो अक्सर गुदा असुविधा वा खुजली देखिन्छ। त्यसपछि छाला सजिलै तल भङ्ग हुनेछ किनभने क्षेत्र स्क्रेत्छेद भइरहेको छ भने दोस्रो जीवाणु संक्रमण को एउटा ठूलो परिवर्तन हो। किनभने यो
सामान्यतया राती हुन्छ, तपाईं समस्या सुतिरहेको हुन सक्छ। यदि यो अब2हप्ता भन्दा अवधिका लागि बन्द गर्दैन तपाईं एक डाक्टर भ्रमण गर्नुपर्छ।
6 छाला मुद्दाहरू - परजीवी पनि यस्तो एक्जिमा, कर्कश, रशेस र एलर्जी अन्य थुप्रै प्रकारका धेरै छाला समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ, र तिनीहरूले शरीर मा जारी कि तोक्षिन्स कारण हो। तर सबैभन्दा खराब भाग पनि भंगुर बाल, बाल हानि र सुख्खा छाला गर्न सक्छ भन्ने छ। तपाईं अस्पष्टीकृत छाला अनुभव भने विषयबारे डाक्टर जानुहोस्।
मांसपेशिहरु र जोडहरुमा7दुखाइ - त्यहाँ मांसपेशिहरु र जोडहरुमा नरम तन्तु
आक्रमण र जलन र पीडा परिणाम हुन सक्छ भनेर केही परजीवी छन् र यो गठिया लागि सामान्यतया गलत छ। दुखाइ यस प्रकारको जारी परजीवी कि तोक्षिन्स गर्न प्रतिरक्षा प्रणालीको प्रतिक्रिया कारण हो। तपाईं ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्न
भने दुखाइ आफ्नो डाक्टर जानुहोस्।
8 दाँत पीस - शरीर मा परजीवी द्वारा जारी बर्बाद र तोक्षिन्स चिन्ता र रेस्त्लेस्स्नेस्स हुन सक्छ र त्यसपछि bruxism निद्रामा समयमा हुन्छ। यो लक्षण सामान्यतया तपाईंले छोराछोरीको पीस दाँत नोटिस भने, डाक्टर एउटा यात्रा तिर्न त, बच्चाहरु प्रभावित छ।
9 मानसिक दुःख - चिन्ता, निराशा, मुड स्विन्ग्स र दृश्य माया गर्ने परजीवी
इन्फेस्तेशन समयमा देखा पर्न सक्छ। परजीवी द्वारा जारी तोक्षिन्स को न्यूरन्स र नेउरोत्रन्स्मित्तेर बिगार्न सक्छ र भन्ने माथि उल्लेख अवस्था के कारण छ। तपाईं अधिकांश समय निराश महसुस वा तपाईं अनुभव भने अचानक मुड swings एक डाक्टर जानुहोस्।
10 रक्तअल्पता वा फलाम कमी - हामी पहिले नै परजीवी तपाईं उपभोग नै खाना मा खुवाउने भनेर, ताकि तिनीहरूले यस्तो फलाम जस्तै आफ्नो भिटामिन देखि चोरी र किन यो फलाम कमी गर्न सक्छ भन्ने छ भन्ने हो। तुरुन्तै डाक्टर तिनीहरूलाई लाग्न सुस्त वृद्धि र छोराछोरीको वजन छ भने त रक्तअल्पता सन्तानको विकास र वृद्धि प्रभावित छ।